January 21, 2021 Xuseen 29
Puntlandtimes (Qardho)-Maamulka Somaliland ayaa soo bandhigay diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka golayaasha deegaanka & barlamaanka Somaliland ka qabsoomi doona inta lagu jiro sanadkaan 2021-ka.
Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Somaliland Saleebaan Cali Koore ayaa muuqaal isaga soo duubay deegaamada Shaxda iyo Misirta oo lagu soo ururiyey dad shacab ah, wuxuuna sheegay inay iska diiwaan gelinayaan meel magaalada Qardho u jirta 15 KM ayna shacabku u diyaarsan yihiin soo dhoweynta Somaliland.
Carmuu dabeecado xun kasoo bartay hargeysa oo duligu yahay qoomuluud soo habaabay
Abdi Ciyaar wa geleen danbe, aaway ciidankii xoogga badnaa ee Puntland, ficilku Ka wanaagsan hadalka.
Ali Cantar says:
Qofka Marka talo faro ka haado oo lug iyo laan isla waayo, oo quusto oo kabo, was Iska hantaatacaa, waalida sakaraatka mowdka baa wax walba ka keena. Qowmu luud dhaqan uma leh, reer Somaliland, waa la ogaa Baraawe iyo Xamarweyne iyo Marka . Nin jabey oo wax uu ku hadlo garan waayey. Guul Somaliand
Waxaan Maqli jiray Ogaadeenka oo Ragga Itoobiya u shaqeeya ugu yeera Daba Qoodhi Tigrey. Hadda kani ma waxaan ugu yeernaa, Daba Qoodhiga Hartiga ee Iidoorka u shaqeeya?! Kkk
Adduunyo Lugaha kor u taagtey oo Madaxa ku socota iska dheh, Harti waddada tusaya Iidoor!!!!!!
hello ninki muuse handarab wasi jirey miya mantay diwangalinayo war maxa dadka beenta ugu shegah inta sawir mel u dhow magalada hargeysah aya waxa la dahay diiwan galin aya ka bilabey magalada qardho war ina kore awal wacal ba ahad hadana qanisimo ba isku darsadey mgrty ninyaho nin weyn iska dhig hadu kudhahay ninki dabada kawasi jirey oo kudhahay sawir iska qad oo waxa dhahdaha qardo mel udhow aya diwangalinaha ina kore qanisnimada muuse handarab ku barey miya gandey ina kore hada aqli la hadahay ord wlaha jeeganta jelka lascanto ku fuleyso ka qabo ina karo awal wacal ba ahad hada waxa ku darsadey qanisnimo qamrisde ina koro ord walah kacasho jeeganto wado muuse handarab ok bye qanis
Miskiin Saleban Cali Koore ID CARD buu xayiisiinayaa dadkiina biyo ay cabaan bay la’yihiin. Shaqadiisa buuna garaneyn hadaan u tilmaamo wax yar Salebanow waxaan kaa rabnaa mashruucan inaad lacag fiican ka qaadatid adigu nafsi ahaantaada lacagtaasna aad silig weyn ku soo iibisid aad ku wareejiso magaalada TALEX Koley hadaadba Horgale tahay ilaasho jiritaankaaga yaysan kugu dhicin taariikh guur sida Reer Burco oo kale oo hadaad maanta qof Somali ah weydiiso taariikh deeda aanba la gareneyn. Horgaleha kan caqliga leh ee fahamsiiya dadkiisa inuu dhibsanayo baa dhaama sida BAASHE u biyaamiyey inuu aad u dhibsanayo Horgale kastoo uu yahay inuu madaxtooyo u dhiso kii ku dhex feeray fadhi ku dirirka. Saleebaanow inta kaliya ee lagaa doonaya waa intaas in sawiradaada UNDP lacag looga qaato adina sandareerto yar lagu siiyo dadkii aad baadiyaha ka soo uruurisayna haraad san yihiin oo xataa aadan xogey yar oo lacag ah ay sonkor shaah ku karsadaan aadan siin karin. Markii lagugu dhaho dadkaaga wax ka sheegna aad sidii eegii u qayliso si xoogey laguu siiyo. Is ok we understand you my brother no worries you’re always welcome into your community no hard feelings.
Dadka Reer puntland ee Reer Sool waa idin fahamsanyihiin inaad xayiisiineyso ID CARD cid wax u aragtaa ma leh adigu wax ku hel ogsoonow na cid wax kuu qabtaa ineysan jirin hada maanta hadaad Garowe timaado xataa inaan xaga laguu eegeyn ohh waa Saleban Cali koore waxaan rajeyneynaa inuu xogey fiican haysto waa laga yaabaa in dhalinyaro ku shaxaado sidaas u faham. Horgale mashruuc lacag ku helaya oo dhuloos ah cidana hooy oranmeyso ee dadkaagaad u xoog badantahay adoon horgale aheyn baad inanka UNDP hargeysa gurigaaga sandareertada kugu siinaya ayaad Garowe iyadoo full ah kaga helilaheyd. Haday dadkayagu doonayaan inay las’anod Horgale bah hararsame ah kula dagaalaan shacabkana lagu kor dhagaalamo waad ogeyd in Garaad Saleban ilahay cimrigiisa ha dheereeyee yiri waa arin dhulbahante dhexdiisa ah nin gadooday ama SIXRAN inuusan dadka isku leyneyn. GOOD LUCK HORGALE SALEBAN cid aad wax yeeleyso baa iska yar sidii eeygii meelaha ka qayli oo ciyaal yar yar ah ha kugu shaqeysteen natiijadeediina waad aragtay hada hadaan ku siino ka badan oo lagu yirah las’anod mashruucan bulshada ugee markaasaad sixirka xoogiisaa kugu kicin oo xoog yeelanin dulinimadaas baad ku jirin ee lacagtaas in buuraan ka hel sawiradaada yeysan raqiis noqon.
Waar dhabayacadii dhuban iyo xaar bay isku dareen markii godkoodii agtooda diiwaangelintii laga bilaabay kkkkkkk.
Waa fulayadii aanu naqaanay waxa keliya ay yaqaanaa Calaacal iyo Aflagaado iyo muusanoow.
Bal waxa Akhlaaq xumo iyo Aflagaado ay ku hadlayaan eega Dhabayacadii fulayada ahaa wasaq bilaa akhlaaq ah nijaas weeye guri xun kusoo koray.
Eri Boowe waxba ha Argagixina Hawshu way soconeysaa maatidana waxba haka wetwerina mala qixinayo yaa Dhabayac Muran Naagood kkkkkkkkkk.
Kkkk In meel la isku sawiro wax weyn ma ahan,ama si bareer ah ama dhuumasho.
Waxaa is weydiin mudan.
Qardho was gobolka bari.Qardho ma soo gaaraan dhulbahante?15Km waa magaalada dusheeda.
Haddii dhulbahante soo gaaro si kastaaba video ha ahaadee waxaa cad.
1-In Puntland Deni aanay ka war hayn Puntland.
2-In Puntland aanay awoodin in ay wax ka qabato lagana awood badan yahay.
Yaa dhulbahante u diidin inay isku sawiraan meelkasta oo dhulka puntland ah sow iyaku maleh waxa la diidayo waxaa weeye in uu nin asaagiis ah oo mashruuc lacag ku qaadanaya uu Horgale u noqdo oo qori la ordo. Indoorka laftigood soo dhaweyni lahayn oo waa dad somaliyeed codina kama xigto Qardho iyo Garowe ee dhaqankoodaa xun. Mashruuca UNDP ee inanka jooga hargeysa wax ku helayo isaguba wuu ku heli karaa iyadoo full money ah 60 miles Garowe instead of 236 miles hargeysa. Godoomiye BAASHE waa fahamsayahay oo waa cadeeyey inuusan jecleyn inuu Horgale u noqdo lakiin Saleban Cali Koore inay idoor dhahaan dadkaagana cay ugu dar weeye waxa la diidayo ee inamada idoorow lacagtiisa full u siiya waqtigu waa 2021 la’idin baray meeshiinaas la fadhiya “waa la’ina xasuuqay” oodweyne iyo hargeysa iyo burco la fadhiya webkaan waa Reer puntland idinkugu imaan meyno kuwiina ee na dhaafa
ADEER MAXAAD LA QAYLINAYSAAN BAROORTU WAA MAXAY, SOWTAN GAROOWE DUSHEEDA LA FADHIYO, QARDHO MAXAAD KA SHEEGAY, BOQORKA BURHAAN BAAN SOO SALAAMEYNAA, CAADI ISKA DHIGA, DHIIGGA HAYSKU KARINA. HA KARAAMO SEEGINA HABAAR LEYGU KARI WAAYE
@Jinac Majeerteen waa dad aan aad ula yaabo.1991 ayaa Daarood ku heshiiyeen in aan HAWIYE lala shaqayn(Horgale)loo noqon,waxaa jabiyay Maxamed Xaaji aadan(Ciise Maxamuud)
Haddana Faroole ayaa ku xigay,AU Col Yuusuf ayaa Caydiid oo 900 qof aan hybaysnay la heshiiyay.
Waxaa ugu cajiib badnaa markii maleeshiyo Caabudwaaq ka soo gurmatay uu AU Cabdirisaq Xaaji Xuseen oo markaa naawilaayay PM,uu ku yiri dhaawacii waxaad tihiin danbiilayaal daadiyay dhiig Somaliyeed(muu arko kuwa 900 dilay)
Maanta waxaan arkaynaa Deni,Faroole iyo kuwo kalee badan oo Majeerteen ah,oo leh wiilkaan Marexan na dhaafiya haddaan Majeerteen nahay hankii waa naga dhintay HORGALE ayaan diyaar u nahay.
HORGALJIMADIINU MA KALIGEED BAA SAX AH?War gala qaraab tago.
Waa beentaa hanuuniye jooga hargeysa waa lagu fahmay miskiinyahow card kaaga baa gubtay
Murtida & hadalka mid ayaan ku soo gunaanaday.. Dhuloos & Waroos waa ciyaalka iidoorka. waa xaqiiq jirta, wax la yiraahdo Horgal ma jiraan waa sheeko borobogaandho ah oo ay samayaan dhabayacada taagta daran.
Dhulbante waxay doonayaan in weeraaan Gorowe & Boosaaso , biliqaysataan waxa yaala, waxaan ku nidhi waar miyaad waalan tihiin waxaan nahay Somaliland , Majeedheenay Tol & waalalo ayaad tihiin waadad Soomaali ah dhibaatada joojiya . Dhulbahnte waxa ay doonayaan in ay qabsadaan dooxada nugaal oo dhan Gorowe. Somaliland taa ma ogola , waxaan ka dhigaynaa Laascaanood , magaalada ugu ugu qurux badan ugu dhaqaalo badan degaamada Soomalida.
si xun uma uu hadal. wax jira ayuu ka hadlay.
Cidina ma diidana Maxweyne Farmaajio, Isaga ayaa ka leexday habkii Somaliyi ku dooratay ,iyo sidii wax loogu dhiibey, ajenda kale ayaa is tusay iyo midaan soconeyn, Ilaa hadana wadda xun iyo burbur Somaliyeed ayuu ku socdaa, waxbaa is tusay bal aan aragno.
Sababta dadkani uga qeylinayaan Dhulka Warsangeli ee diiwaangelintu ka dhacdey oo aanay uga qeylin Tukaraq oo dushooda ahi waa iyada oo ay aaminsan yihiin in ay Sanaag Bari waxa imika loogu yeedho ay hanteen amaba Warsangeli Puntland la Jiro. Waxay isku maaweelinayeen intaas mudo badan in laga joogo. Imikuunbey ku baraarugeen inaanu Warsangeli iyaga lawada jirin oo in badani Reer Somaliland dhaba yihiin oo ay weliba Somaliland u qabaan Jaceyl badan.
Ma dad kaasoo horjeeda ayaa is diiwaan gelin lahaa? Goobwalba oo la geeyay dadku si badan ayay iskaga diiwaangeliyeen. Wax walba oo ay Puntland isku deydo si dhibyar bey u fashilantaa. Xoog meeshaas kulama wareegi karaan, dadka ayuunbey dhegeha habqabiilnimo ah uga qeyliyaan. Tashuush iyo humaag been ahna wey ku furaan. Maanta kolkii diiwaangelintii la geeyay meelo badan dadkii iyagoo cagahooda ku socda oon lasoo khasbin ayay isasoo xaadiriyeen.
Qardho dusheeda iyo Garoowe dusheedu waxba kuma kala duwana. Labada sooneba waxaa dega Harti Woqooyi. Somaliland beyna ka tirsan yihiin. Reer Somaliland hadaanu nahay waxaano kafaalo qaadeynaa inaanaan Xuduudayada soo dhaafin. Reer Puntland werwerka ha iska daayeen. Qabiileysigana ha joojiyeen.
Jirac ama Jinac.
waa wax yar oo qarmuun quraajada le,eg , maraka lagu joogsadana dhinta.
Jirac , jinac .
waxay ka mid yihiiin qabiilka quraanjada, cilmiga Antinoligy . ayaad ad ka baran kartaan . Jirac.. waa Qabiilka quraanjada .
Mubarak numbarkaaga iyo meesha aad taaganyahay baan kuu soo dirin Somtel 7428 your last 4 numbers as hole yahow go website yadadiina meelahaas ka nac nac lee dameeryahow
KKKK OGAADEEN waa soo arkeen yaabkaan oo kale. Qoomuluud meel loo raaco ma leh. Rag ma aha dumarna ma aha.
Haddii Dhulbahante uu la haan lahaa RUBUC kalsooniga ay OGAADEYN la yeehey maanta xaalka dhulbahante sidaa iyo si u dhow ma ahaadeen, oo booska Dhulbahante uu haatan ku jiro waxaa ku jiri lahaa IIDOOR. Waa iska xaal adoon. Majeerteen iyo Iidoor ixtiraam ayaa ka dhexeeya, waxaase la garan la’yahey SASKA dhulbahante ku jira halka uu salka ku hayo.
Mid aan idiin sheego ciyaaal. Dhuloos & Waroos waa ciyaalka iidoorka. Ilhaahay ayaa ka dhigay. dariskaaga ma dooran kartid… waxaa xigta Majeerteenay saqajaamad futatada waxay u luxaysaa Hawiye . Dhulbakante & Warooos wax dan ah kama laha.
Waa ciyaalkii aan ku dhalay qurbaha , ma fahamsana siyaasada qabilga ee Zoomaaliada… Guskayaga ayaa ka wtn.
Ma adaa wax dhalay mise adaa qurbaha lagugu dhabaa oo ku ah rainbow-boy. Adiga iyo koore isku qowm ayaad tihiin. fucking- puffer. Tan iyo inta aad webkaan soo gashay kama Hadashid wax aan ahayn futo.
War ninankiinaan reer somaliland waxaan duloobay wax kale ku badala. Mise sheekadu waa caadi oo waa liberalism oo aqoonsiga ayaa loogu danaynayaa.
Ayaan hore ayaan arkayey ni Shaacir la yiraahdo oo reer Hargeeysa ah oo “Laga roone nimada” meesha ka socota ka hadlay. Kaas oo uu nin u jawaabay yiri, “war dee arrinta haddi aad ka hadleeyso hoos baa wax loo sheegaaye kor ha u qaaylinin dee”!!!!! kkkkkk
WAA BEEN WAXAAN IIIDORKU WAA INAN GUMEED KUWA SHILING KA RAADSADANA WAA DAMEERO RARAN. HHHHHHHHHH MAAMULKA IIDORKU MA XISHOODO BAL CAQLIGIDA YAR ARAG 20 QOF OO REER MIYI AH GAAJO HEYSO INEY SOO ARUURIYAN AYEY WAXEEY YIRAAHDAN…..DIIWANGALINTO MASHRUUCA AHEED EE SANAAG BARI WEY SOCON WEYDAY……DIIWAN GALIN WAA MASHRUUC LACAG LAGU CUNO OO IIIDORKA SAMEYSTEY LACAGNA LOOGA RAADSADO DEEQBIXIYASHA. PUNTLAND WEY SANEYN KARTAA INEY TAGTO TUULO KA MID AH SOOL INEY DIIWAN GALISO 30 QOF OO REER MIYI AH WAXBA LAMA AHA……
Aniga waxaan qabaa in arintaa tahey fariin ku docota beesha haritiyeed, we jooga daafaha qaaradaha africa,Europe Asia,Australia, Canada iyo USA. Dadkiina iyo dalkiina hartow cidi uma maqna ceelna uma qodna.